Ndụmọdụ Ndị Ọkachamma: Esi Achọpụta Glassware nke Dị Mma
Iko mmanya bụ nnukwu akụkụ nke ọdịbendị na ihe nkiri nke mmanya - otu n'ime ihe mbụ ị hụrụ banyere ezigbo ụlọ oriri na ọ diningụ diningụ, ọkachasị nke ndị ọdịda anyanwụ - bụ iko dị na tebụl. Ọ bụrụ na enyi gị enye gị iko mmanya mgbe ị na-eme oriri, ogo iko ahụ ọ ga-enye ga-ekwu ọtụtụ ihe gbasara mmanya dị n'ime.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka nke a na-etinye oke ibu na ngosi, n'eziokwu, ogo iko ahụ na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ụzọ ị na-enweta mmanya. Ya mere ọ bara uru itinye oge ụfọdụ ịghọta ihe nrịba ama nke ịdị mma ka ị nwee ike ijide n'aka na ị nweghị nnukwu ahụmịhe site na iji iko glassware nke ahụ erughị ọkọlọtọ.
Isi ihe ị ga-atụle bụ idoanya. Dịka mgbe anyị nụrụ ụtọ mmanya, anyị nwere ike iji anya anyị dịka ngwaọrụ anyị nke mbụ na-ekpebi ogo nke iko. Achịcha mmanya nke ejiri kristal mee (nke nwere ndu) ma ọ bụ iko kristal (nke na-enweghị) ga-enwupụta ma doo anya karịa nke sitere na iko oromaiki (ụdị iko eji eme windo, ọtụtụ karama na ite). Adịghị ọcha dịka afụ ma ọ bụ ihe ịchọ mma nke na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ nke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ihe ọzọ na-egosi na ejirila ala dị ala.
Zọ ọzọ ị ga - esi mata ma iko ahụ dị ka kristal ma ọ bụ iko bụ iji aka gị jiri aka gị wee pịa akụkụ nke kachasị nke nnukwu efere - ọ ga - eme ụda mara mma dị ka mgbịrịgba. Crystal dị mma karịa iko ma yabụ na ọ yikarịghị ka ọ mgbawa ma ọ bụ ịgbawa ka oge na-aga.
Isi ihe nke abụọ ị ga-atụle bụ ibu. N’agbanyeghi na iko kristal na nke kristal di dikariri karịa enyo, ike ha gbakwunyere na ha ga - enwusi ike nke ukwuu na iko kristal nwere ike ịdị gịrịgịrị karịa nke iko. Nkesa nke ibu di ezigbo mkpa: okpokoro kwesiri ibu ma buru ibu ka iko ahu ghara ipu n'elu.
Agbanyeghị, ịdị arọ nke isi ya na ịdị arọ nke nnukwu efere ahụ ga-abụrịrị ihe ziri ezi ka iko ahụ wee dị mma ijide ma na-efegharị. Iko mara mma nke agba agba agba agba mara mma na-adị mma ile anya mana ha na-etinye oke ibu ma nwee ike ikpu mmanya ahụ n'ime iko ahụ.
Ebe nke atọ igodo ịchọ mma iko mmanya bụ rim. Rim akpọrepu, nke a na-ahụ nke ọma ka ọ dị okpokoro karịa nnukwu efere dị n'okpuru ya, na-enye ahụmịhe na-adịchaghị mma karịa nke a na-ete laser.
Tonata mmetụta a dokwuo anya, bufee ya oke site na ị drinkingụ mmanya n'ime mpe mpe akwa na mkpụrụedemede gbara gburu gburu: mmanya ahụ ga-adị ka nke siri ike ma sie ike. Agbanyeghị, akwa belata laser bụ ihe na-emebi emebi karịa nke akpọrepu na ya mere iko ahụ kwesịrị ka ejiri kristal dị elu mee ya iji hụ na ọ kaghị ngwa ngwa.
Isi ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ ma a na-afụ iko ma ọ bụ igwe. Blowgbanye aka bụ aka nwere ọrụ ọfụma nke ndị otu aka ọrụ na-abawanye ụba na-eme ma na-erikwa oge karịa ịkụ igwe, yabụ iko na-afụ ọnụ dị ọnụ.
Ka osila dị, ogo igwe na-etolite etolitela nke ukwuu nke ụbọchị ndị a ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji igwe eji eme ihe maka ọkọlọtọ. Maka ụdị ndị pụrụ iche, etu esi, imi aka bụ mgbe ụfọdụ naanị nhọrọ dịka ọ bara uru iji mepụta igwe ọhụrụ maka igwe nwere iko ma ọ bụrụ na ngwaahịa a na-agba ọsọ buru ibu.
Ihe nlere anya banyere etu esi ahụ igwe na - eme ka anyị meghee iko bụ na enwere ike ịnwe aghụghọ dị omimi na ntọala nke iko igwe kwụ ọtọ, mana ọ bụ naanị ndị nwere iko na - achọ iko nwere ike ịchọpụta ya.
Iji mee ka ihe doo anya, ihe anyị tụlere bụ naanị maka ịdị mma na anaghị emetụ ụdị ma ọ bụ ụdị. Mụ onwe m nwere mmetụta siri ike na enweghị iko ọ bụla dị mma maka mmanya ọ bụla - ị drinkingụ iko Riesling site na iko Bordeaux ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka mmetụta ọ na-agaghị emebi "mmanya. Ọ bụ ihe niile gbara ha gburugburu, mwube na ụtọ onwe gị.
Na-a glassesụ iko iko mmanya nke Sarah Sarah Heller mma iko mmanya na-enye ndụmọdụ banyere otu esi akwụsị iko mmanya dị elu
Iji nye gị ahụmịhe kachasị mma enwere ike, weebụsaịtị a na-eji kuki. Maka ozi ndị ọzọ, biko zoo aka na Nzuzo Nzuzo anyị.